[08 / 10 / 2019] အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရှိန်မြှင့်ဖို့ရထားလမ်းစနစ်များ, ဒေသခံအလေးချိန်နည်းပညာပေးတော်မူလတံ့	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[08 / 10 / 2019] ငါ Eskisehir အတွက်လမ်းရထားထဲမှာဖတ်ပြီးပါပြီကျောင်းသားများစာအုပ်များ, နိုင်ငံသားများမှလက်ဆောင်များဖြစ်ကြသည်	26 Eskisehir
[08 / 10 / 2019] အဆိုပါတင်ဒါအတွက် afray လေ့လာရေး, Project မှ Row ထဲမှာ Done	03 Afyonkarahisar
[08 / 10 / 2019] Antalya ၏ 19 ခရိုင်အသစ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုလေ့လာ Start ကိုပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်	07 Antalya
[08 / 10 / 2019] ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏ဖျက်သိမ်းခြင်း Akdeniz Osman မြန်ရထားစီမံကိန်းမည်သို့နှောင့်နှေးပါသနည်း ..	16 Bursa
[08 / 10 / 2019] Cakir CHP: 'ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာအင်စတီကျုဘုတ်အဖွဲ့သင့်ပါတယ်Karabük' '	78 Karabük
[08 / 10 / 2019] ဤတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရောက်ရှိပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်များမှာ! .. နယူးအဝေးပြေးခွန်ကောက်, တံတားနှင့် YHT အခကြေးငွေများ	06 တူရကီ
[08 / 10 / 2019] ဓါတ်ရထားဘူတာ Tourniquets Advertising ကြော်ငြာအာကာသကုမ္ပဏီတင်ဒါ Kayserili လက်ခံတွေ့ဆုံ	38 Kayseri
[08 / 10 / 2019] ပထမဦးဆုံးအလမ်းရထားသံလမ်းDüzceလမ်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဖယ်ရှားခံရဖို့အဖြစ်	81 Duzce
[08 / 10 / 2019] တူရကီရဲ့အများစုကပျော်စရာသိပ္ပံပွဲတော်မှာ 150 တစ်ထောင်လည်ပတ်သူများ	42 Konya
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirKadifekalel Da ရွက် Make မှကလေးများ
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ပွဲတော်များ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာလူမျိုးကစီစဉ်ခြင်းနှင့်တတိယတစ်ဦးချင်းစီကတခြား၏အရောင်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူနောက်ကွယ်မှနေ၏။ အဆိုပါပွဲတော်မြို့တော်မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer, ပင်လယ်နှင့်ရွက်စိတ်အားထက်သန်သူတို့က, ရွှေ့မည်ကြောင်းဖို့မြို့ရဲ့နောက်ကျောအတန်းသတိပြု၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်ဆုရရှိသူဖို့ဆုပေးခြင်း "ကျနော်တို့ကအောက်တိုဘာလကနေဘဝမှ Kadifekale ကနေကလေးက 15 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွက်အသင်းနှင့်အတူ 10 ဖြုန်း," ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဤသည် Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့တတိယနှစ်တွင်ဖြစ်ပါသည်, နိုင်ငံသားများသည်သင်၏ရွက်တစ်ဖန်လည်းအတူတူယူဆောင်နေကြသည်။ İzmirlilerနှင့်တစ်ဦးမမေ့နိုင်သောအမြင်အာရုံပှဲရောင်စုံရွက်နှင့်အတူတန်ဆာဆင်ပင်လယ်အော်၏အမြင်များဖြင့်လိုက်ပါသွားပွဲတော်များအတွက် Izmir မှလာမယ့်။ 400 အားကစားသမားများအကြောင်းကို Izmir ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းပြိုင်ပွဲများ၏ပြီးစီးအောက်ပါသမိုင်းဓါတ်ငွေ့စက်ရုံအတွက်အောင်မြင်သောအသင်းပါဝင်ခဲ့နောက်ဆုံးညဥ့်ကျင်းပဆုအစီအစဉ်ကိုပေးထားခဲ့သည်။ ခြုံငုံအသင်းဖလား၏ပိုင်ရှင်, ဒုတိယ Arnesen သံစုံတီးဝိုင်းစဉ် Arkas Third-MAT ရွက်လွှင့်အဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးလူမျိုး Cygnus ပင်လယ်ကူးအမျိုးသမီးသင်္ဘောသားပါဝင်သည်ဟုဘယ်မှာ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ရဲ့ပြိုင်ပွဲ၏အထူးဆု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆုအခမ်းအနား Izmir မြို့တော်ဝန် Soyer မှာသူတစ်ဦးအလွန်အောင်မြင်သောအဖွဲ့အစည်းကကျန်ရစ်ပြောသည်စကားပြောသော, ဒီပွဲတော်သူတို့နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိရွှေ့ဖို့နောက်နှစ်ကနေအလုပ်စတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Soyer, သူတို့သားသမီးတို့အဘို့ရွက်လှုပ်ရှားမှုများ Kadifekalel မှအခြားခြေလှမ်း 15 ယူပါလိမ့်မယ်နေစဉ်ကအောက်တိုဘာလတွင်အကောင်အထည်ဖော်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှာ, အ Soyer သူတို့ 10 ကလေးများနှင့်အတူတစ်ဦးရွက်ကလပ်ထူထောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်, "ဒီကလပ် optimistl စတင်ပါလိမ့်မည်။ ဘားနတ် Bey, Arkas အလွန်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ကနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စက်လှေများနှင့်နည်းပြများအပ်နှံ။ ဒီသားသမီးများ၏အသီးအသီး, သားသမီးတစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့သူတို့နည်းပြပြန်ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရွက်သင်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆန္ဒရှိ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်Tunç Soyer သူလည်းပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်သဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးခဲ့တယ်လည်းအမျိုးသမီးများအသင်းမိတ်ဆွေများကို racers အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အရာအားလုံး Izmir နှင့်ရွက်
ပဲတစ်နေ့မဟုတ် 365 ရက်ပေါင်းတူရကီအဆိုပါ Ozlem Akdurak ဆုအခမ်းအနားတွင်သူ၏မိန့်ခွန်းထဲမှာရွက်လွှင့်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ, Izmir ရဲ့ပင်လယ်နှင့်ရွက်မေတ္တာရှိတဲ့သမ္မတကပြောပါတယ်ရှိခြင်း၏မြို့အဘို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါသည်, သူအွန်ဒလူအရွက်လွှနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျ၏ညှနျကွားအတွက်တိုးမြှင့်မျှော်လင့်ချက်ကဆိုသည်။ Arkas ဘုတ်အဖွဲ့ဒုတိယသမ္မတဘား Arkas နိုင်ငံတော်သမ္မတကြေး, Soyer ရဲ့တူညီတဲ့လိုင်းပေါ်တွင်သူတို့အတှေးအချေါနှငျ့ပတျသကျသောအစိတ်လှုပ်ရှားမှုအလေးပေး "Izmir အတွက်ကျနော်တို့ Arkas မိသားစု, ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း Aegean အတွက်ပင်လယ်ကွေ့အထူးသဖြင့် Izmir အတွက်ရွက်မြှင့်တင်ရန်ရှိသည်သောအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။
ထိုအခါ Marmaray မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းချုံးချုံးကျသွားတယ်အမေရိကရွက်လွှင့်ခဲ့သည်! 24 / 02 / 2012 Marmaray နှင့်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းများYenikapı'dan "ရှေးခေတ်သင်္ဘောသင်္ချိုင်း" တွင်တူးဖော်နေစဉ်အတွင်းတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြပါပြီသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အာရုံကိုဆွဲငင်။ အဆိုပါရေအောက်ယဉ်ကျေးမှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏စာပေဌာနအစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ် (IU သည်) ကျောင်းမှာ IR သင်္ဘောမှောက်မှုတစ်ရပ်စီမံကိန်း Assoc ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဌာနမှူး့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေ။ ဒေါက်တာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း Kocabas, သူ့ကြေညာချက်, Yenikapı'danအတွက်ရှေးဟောင်းသင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုသင်္ဘောအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘော repertoire ရောက်ရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သင်္ဘောကနေခေါ်ဆောင်သွားပြည်, သူတို့ထူထောင်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ကြသည်နှင့်အ Kocabas သူတို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအလုပ်ထုတ်သယ်ဆောင်ကြောင်းဖော်ပြသည်နစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောမှကျေးဇူးတင်စကားမှာဗိုင်ဇန်တိုင်းကာလပိုင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနစ်မြုပ်နေသောသင်္ဘောပြတိုက်အစ္စတန်ဘူလ်၌တည်လိမ့်မည်သတိပေးခဲ့သည်။ တူးဖော်သော 36 သင်္ဘော ...
Antalya Kepez ကမ်းခြေရွက်လွှင့်ကလပ်အလွန်Yakışခဲ့သည် 31 / 10 / 2018 Antalya မြို့တော်ဝန် Menderes Turel, အစဉ်မပြတ် Antalya ၏ဦးစားပေးသူဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်နိုင်ငံရေးတစ်လမ်းသွားကိုမြင်လျှင်ဆိုပါတယ်ကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Turel ဦးစားပေး, အလေးပေး Antalya များ၏နိုင်ငံရေးတွင် Antalya ၏အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့ကဒုတိယအစီအစဉ်ကိုယူသောအခါဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း "အခါအာဏာပိုင်နှင့်ကျမတို့အသံကျယ်သူတို့ကိုထွက်ပြောပါရန်ရှိသည်ဆိုက်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ Antalya ဆိုးရန်ငြိုးထားခြင်းမှသားကောင်လဲကြသောသူတို့အဘို့ရာအရပ်ကိုရောက်ရှိ" ဟု၎င်းကပြောသည်။ Park မှာ Coastal နေထိုင်မှု Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဖွငျ့ Antalya ရွက်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပင်လယ်ပြင်အားကစားအထူးအားကစားကလပ်အသစ်တစ်ခုစက်ရုံပြီးစီးတဲ့အခမ်းအနားနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Menderes Turel, အ Antalya Hasan Akıncıoğluရွက်လွှင့်ကလပ်၏ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးချုပ်အာမက်လက်ဆောင်များတည်ထောင်သူ, ...
3 ။ အဆိုပါ Izmir ဂလားပင်လယ်အော်ရွက်လွှင့်လူမျိုးပွဲတော်နှင့်အတူ Start 28 / 09 / 2019 ဒီနှစ်တတိယအကြိမ်အရောင်ပုံရိပ်ကိုများအတွက် Izmir ပွဲတော်ဇာတ်စင်၏ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစတင်ပီပီ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer အသံပွဲတော်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲ။ တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးပြိုင်ကားသမား Cygnus လှေနှင့်အတူပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်အားလုံးအသင်းများကိုနိုငျငံတျောသမ်မ Soyer ပါဝင်ပါသည်သူရည်မှန်းချက်ကြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေး၏။ သုံးနှစ်အကြီးမြတ်အကျိုးစီးပွား Izmir ပွဲတော်ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အတူနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ကြနှင့်ပွဲတော်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ပြိုင်ကားစတင်ခဲ့သည်။ Arkas Izmir ပင်လယ်ကွေ့ပြိုင်ပွဲ Karşıyaka အဆိုပါရွက်လွှင့်ကလပ်အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ရွက်လူမျိုးအဖြစ် Izmir ၏ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အတွင်းရှိနူးလှေလှော်ကစားနည်းနဲ့လှေလှော်ပြိုင်ပွဲကဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ပွဲတော်ယှဉ်ပြိုင်မှု, Izmir မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer ရဲ့ ...
တူရကီကလေးများနှင့်စစ်ပြန် Den770 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းPalandökenနှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့သည် 22 / 03 / 2013 Erzurum အတွက် 15 နှင်းလျှောစီးချန်ပီယံမှသည် 17-2013 မတ်လ7နေ့စွဲ '' တူရကီကလေးများနှင့်စစ်ပြန်, 70 အတွက်နှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံမှုကစီစဉ်တူရကီနှင်းလျှောစီးဖောငျဒေးရှငျး, တူရကီPalandökenအတွက်ဒေသyapıldı.yarışထံမှ 16 မှ 450 အားကစားသမားများဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အစဉ်အလာတစ်ခုစီကိုယခုနှစ်မတ်လကကျင်းပခဲ့ပြီး, နှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲများအတွက်တူရကီဖောင်ဒေးရှင်းမှဟောင်းတဦးအမျိုးသားပြန်လည်အားကစားသမားအားကစားသမားgösterdi.ötလက်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားမျက်နှာ၌ကျသွားဆီးနှင်းနှင့်အတူပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ရယ်။ အနုပညာမှာလေထုပြိုင်ကားတူရကီနှင်းလျှောစီးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအတူသာယာသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတွက်လှပသောဖြစ်yapıldı.yarış ထို့အပြင် Ozer သမ္မာသတိရှိကြလော့, တူရကီနှင်းလျှောစီးဖောငျဒေးရှငျးကသမ္မတ Canip Karakus, Dedeman Group မှဥက္ကဋ္ဌ Murat Dedeman နှင့်အိုလံပစ်အသင်းမှနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ...
ကျောင်းကကလေးတွေပို့ဆောင်ခံရဖို့ cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူKeçiörenအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 22 / 01 / 2012 တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Melih, Keçiörenခရိုင် AK ပါတီအဖွဲ့အစည်း4။ သူကသာမန်ကွန်ဂရက်ပါဝင်ခဲ့။ MAG, ဒီမှာကသူ့မိန့်ခွန်းမှာသူကသူတို့နှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်Keçiörenliတစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးလျှောက်လွှာကဆိုသည်။ တူရကီရဲ့အရေးအပါဆုံးကျောင်းကစီမံကိန်း Kecioren အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လျှောက်ထားကြောင်းဖော်ပြ MAG "15 Ovacik အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများတွင်ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ သူတို့ဟာအမြဲမြင့်မားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးအားကစားရုံသင်ကွဲပြားခြားနားသောလူနေမှုဒေသများရှိလိမ့်မည်, လည်းရှိပါသည်။ အဆိုပါ Kecioren တဦးတည်းအထက်တန်းကျောင်းအတွင်း 15 ဤနေရာတွင်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သူသည်မူလတန်းကျောင်းများအားလုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ပညာရေး၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ 36 လူတွေကိုလက်ရှိအတန်းထဲတွင်လေ့လာနေရသည်။ စုံတွဲများဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , ဤအတန်းနှစ်ခုလုံးဆိတ်အရှုံးမပေး ...
ထိုအခါ Marmaray မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းချုံးချုံးကျသွားတယ်အမေရိကရွက်လွှင့်ခဲ့သည်!
Antalya Kepez ကမ်းခြေရွက်လွှင့်ကလပ်အလွန်Yakışခဲ့သည်
တူရကီကလေးများနှင့်စစ်ပြန် Den770 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းPalandökenနှင်းလျှောစီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်
အဆိုပါ Olympos တောင်တန်း Cableway အတွက် Chimaera နှင့်အတူသားသမီးများအတွက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစားထိုးတစ်ရှူး
အမြိုးသားအ Yakutiyel နှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (134) စက်တင်ဘာလ 2019 (555) သြဂုတ်လ 2019 (508) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (974) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)